Happy New Year Promotion - Mr. Discount (Myanmar)
Home / Offers / Happy New Year Promotion
🔴Up to 50% Discount♦️
So Young ရဲ့ ချစ်ခင်ရပါသော ကာစတန်မာများရှင့်,
ဆရာမက မန္တလေးတွင် ၁၆,၁၇,၁၈ ရှိပါမည်!
နေပြည်တော်တွင် ၁၉,၂၀,၂၁ ရှိပါမည်!
ရန်ကုန်တွင် ၂၂မှ စရှိပါမည်!
ထို့ကြောင့် မျက်ခုံးတက်တူး, နှုတ်ခမ်းအရောင်သွင်းခြင်း, အိုင်းလိုင်နာတက်တူး ထိုးချင်သူများ ဖုန်းဆက်ပြီး booking ကြိုလုပ်ပေးထားပါနော်!
Happy new year per!♥️
😊So Young (Yangon)😊
တိုက်၂၆, အခန်း၀၁, ရွှေအုံးပင်အိမ်ယာ(၂), ရန်ရှင်းလမ်းမကြီး, ရန်ကင်းမြို့နယ်, ရန်ကုန်မြို့!
😊So Young ( Mandalay) 😊
😊So Young (Nay Pyi Taw) 😊
အမှတ်( ပ-၁၁၈)၊ သပြေကုန်းစျေးအနီး, ကျောက်မျက်အနောက်ဘက်!
So Young မှ ဤ Promotion သည် January 31, 2020 အထိသာဖြစ်ပြီး Promotion တွင် Usage နှင့် Terms & Conditions များရှိနိုင်သည်။
ဖော်ပြပါ Promotion အား ဤ website တွင် စတင်ထည့်သွင်းဖော်ပြသော နေ့မှာ January 14 2020 ဖြစ်ပြီး So Young မှ အချိန်မရွေးပြောင်းလဲနိုင်သည်။